जनै खटिराको बेलैमा उपचार नभए मृत्यु ? (भिडियो सहित) | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
जनै खटिराको बेलैमा उपचार नभए मृत्यु ? (भिडियो सहित) Home
जनै खटिराको बेलैमा उपचार नभए मृत्यु ? (भिडियो सहित)
Apr 20, 2017 15:04
16K0comments
जनै खटिरा एक प्रकारको भाइरल इन्फेक्सन हो । भेरिसेला जोष्टर भाइरसका कारण जनै खटिरा आउँछ । जनैको जस्तो आकारमा देखिने भएकाले यसलाई जनै खटिरा भनिएको हो ।
जनै खटिरा लागेपछि निको हुँदैन र मृत्यूसम्म हुन्छ भन्ने भ्रम जनमानसमा रहेको छ । बास्तवमा के हो त जनै खटिरा ? कस्ता व्यक्तिलाई यो रोग लाग्ने संभावना रहन्छ ? के हुन् जनै खटिराका लक्षण र उपचार नगरे कस्तो जोखिम आउन सक्छ ? जनै खटिराको विषयमा वरिठ छाला रोग विशेषज्ञ डा. नितेश राज पोखरेलसँगको कुराकानीमा तयार पारिएको सामाग्री । जनै खटिरा सबै उमेरका मानिसलाई हुन्छ । विशेषतः पहिले ठेउला आएका व्यक्तिमा जनै खटिरा आउँने संभावना बढी हुन्छ । यसको अर्थ ठेउला आउने सबैमा जनै खटिरा देखिन्छ भन्ने छैन ।
यो भाइरस शरीरमा एक पटक प्रबेश पछि जीवनपर्यन्त रहन्छ । सुसुप्त रुपमा बस्ने भाइरस अलिकति अनुकुल समय वा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएमा पुनः देखापर्दछ । कस्ता व्यक्तिलाई जनै खटिरा आउने संभावना प्रवल हुन्छ ? पहिले ठेउला आएका ।
एचआभी भएका ।
मधुमेह, मृगौला, मुटु, क्यान्सर लगाएतका दीर्घ रोगी ।
खटिरा आएको ठाउँमा धेरै दुख्ने ।
पानीका स–साना फोका आउने ।
शरीरको कुनै एक पाटोमा खटिरा आउने ।(हात, पाखुरा, खुट्टा वा कुनै पनि ठाउँमा)
झस्का हाने जस्तो गरि दुख्ने ।
जनै खटिरा लागि सकेपछि जति सक्दो छिटो परीक्षण गराउनु पर्छ । यसको एक दुई दिन भित्रमा परीक्षण गरि औषधि सेवन गरेमा दुखाई कम हुनुका साथै रोग पनि छिट्टै निको हुन्छ । यो रोग लागिसके पछि कसैलाई एक दुई हप्तामा ठीक हुन्छ त कसैलाई एक दुई वर्षसम्म दुखाई रहिरहने हुन्छ । समयमै उपचार नगरे यस्ता रोगको जोखिम उच्च :
मुख बांगो हुने ।
आँखामा दृष्टि कम हुने ।
मष्तिस्क घात हुने ।
समयमै उपचार नगरेको अबस्थामा यो रोगले मृत्यु समेत हुन सक्छ । यस कारण जति जक्दो छिटो उपचार गर्नु पर्दछ ।
Dr. Nitesh Raj Pokharel
Grande International Hospital, Kathmandu isamulti-specialty hospital that offers preventive and curative healthcare services. It was established withamotive “Care to Cure” in...